संखुवासभा घटना : कहाँ हरायो रञ्जनाको फोन ? फोन खोज्दै प्रहरी – Paluwa Khabar
काठमाडौ । संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ उम्लिङका तेजबहादुर कार्कीसहित उनको परिवारका ६ सदस्यको श व फेला परेको घटनामा प्रहरीले उनीहरुकै भतिजा नाता पर्ने लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । तर पनि अझै केही यस्ता कुरा छन् जुन अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । प्रहरीले केही प्रमाण र साबिती बयानका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
लोकबहादुरले घटना स्वीकार गरीसकेका छन् । तर अझै सम्म रञ्जनाको फोन भने फेला परेको छैन । निधन भएका तेजबहादुरकी बुहारी रञ्जनाले दुईवटा मोवाइल बोक्ने गरेकी थिइन् । उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा थिए । प्रहरीका अनुसार एउटा आफूसँगै थैलीमा राख्ने र अर्को फेसबूक चलाउन तथा विदेशमा रहेका श्रीमानसँग भिडियो कल गर्न प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
उनले घरमै राख्ने गरेको त्यो स्मार्टफोन अहिलेसम्म भेटिएको छैन । प्रहरीले लोकबहादुरले लगेर कतै लुकाएको वा फालेको आशंकामा उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो, तर उनले केही बताएका छैनन् । ‘त्यो फोन अहिलेसम्म पनि हराएको छ, फेला परेको छैन, ‘सीडीआर हेर्दा पनि अहिलेसम्म अन भएको देखिँएको छैन, प्रहरीले भने ।
Prevश्रीमतीको निधन हुँदा सँगै सुतेका श्रीमानले किन थाहा पाएनन् ? ८ दिन हुँदा पनि उठेन शव, श्रीमान र अमाजु पक्राउ
Nextकोरियाले राख्यो अर्को सर्त, यो सर्त पूरा नभई नेपाली कामदार कोरिया नलाने